मनिषा कोइरालाको जिन्दगीका उतारचढाव, २० जनासँग प्रेम सम्बन्ध, एक डिभोर्स ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २९, २०७५१४:०१
४८ बर्षकी मनिषा कोइराला हावाको झोँका झै बलिउडमा पाइला राखिन् र पहिलो फिल्मबाटै इलु इलु गर्लको नामबाट पपुलर भइन् । नेपाली सुन्दरी मनिषाले बर्षौ आफ्नो क्रेज बनाइ राखेकी छन् ।
९० को दशकमा मनिषा काजोल, माधुरी र करिश्मा जस्तै बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । मनिषाले फिल्ममा केही यादगर भूमिका निभाएकी छन् । उनी अभिनय र सुन्दरताका कारण जति चर्चामा छिन् उती नै विवादका कारण पनि चर्चामा छिन् । बताइन्छ की मनिषा आफ्नो फिल्ममा भन्दा बढी व्यक्तिगत सम्बन्धमा ध्यान दिन्थिन् ।
उनका केही अफेयर्स रहे । यसको असर उनको फिल्मी करिअरमा समेत पर्यो । ज्याकी श्राफ, सलमान खान, नाना पाटेकर, विवेक मशुरान, आर्य वैद्य लगायतसँग उनेको सम्बन्ध थियो । सलमान र मनिषा फिल्म ‘सङ्गदिल सनम’ र ‘खामोशी’ को सुटिङको समयमा नजिकिएका थिए । ‘खामोशी’ को सेटमा सलमान र मनिषाको प्रेम बसेको बताइन्छ ।
उनी सँधै साँचो प्रेमको खोजिमा रहिन् । उनको दिलको ढोका केही मानिसहरुका लागि खुले । मनिषाको नाम उनका सहकर्मी ज्या श्राफसँग पनि जोडियो ।
अनिल कपूरको नाम पनि मनिषासँग जोडियो । बलिउडमा जबदेखि मनिषाको इन्ट्री भयो तब उनका रोमान्सका किस्सा सुरु भएका थिए । मनिषाको नाम अहिलेसम्म २० भन्दा बढीसँग जोडिएको छ । उनको पहिलो अफेयर फिल्म ‘सौदागर’ का सहकर्मी विवेक मुशरानसँग भएको थियो । दुवैले एकै साथ फिल्म गरे । जब विवके बलिउडमा फ्लप हुन लागे तब मनिषा पनि उनीसँग टाढा भइन् ।
सम्राट मनिषा भन्दा ७ बर्ष कान्छा थिए । केही समयसम्म उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो थियो । तर उनीहरुको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्न सकेन र सम्बन्ध विच्छिेद भयो । त्यसपछि मनिषालाई क्यान्सर लाग्यो । अमेरिकामा उपचार गराएर उनले क्यासर जितेकी छन्
चीनको नयाँ चमत्कार ! १,३७० मिटर अग्लो पहाडमा बनायो ३ तल्लाको ३० कि.मी. लामो हाइवे !